प्रचण्डले पार्टी एकता घोषणा सभामा के भने ? (पूर्णपाठ) - Everest Dainik - News from Nepal
प्रचण्डले पार्टी एकता घोषणा सभामा के भने ? (पूर्णपाठ)
आज मलाई शब्दको दुख भएको छ । आजको यो एकता आफँैमा बहुआयमिक छ । नेपाल राष्ट्र र नेपालीको जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति, कम्युनिष्ट आन्दोलनको विचार, सिद्धान्त र दर्शनलाई परिमार्जन गर्दै एउटा ठूलो बहसमार्फत कम्युनिष्ट विचारधारालाई विकसित गर्नका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा योगदान गर्ने दृष्ट्रिले, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थिरता, विकास र सुशासनको नयाँ सन्देश दिने दृष्टिकोणबाट यो एकता अर्थपूर्ण र बहुआयमिक छ ।
मलाई आज ०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको याद आएको छ । त्यो आन्दोलनले नयाँ परिस्थिति जन्मायो । सामन्तवाद, निरंकुशताका विरुद्ध सबै कम्युनिष्ट शक्तिहरु एकठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने कुराको चेतना दियो । छिटोभन्दा छिटो निरंकुशतन्त्रको विरुद्ध सबै राजनीतिक दलहरु एकठाउँमा जुटुन् भन्ने त्यतिबेला जनताको चाहना थियो । तर दुर्भाग्य कम्युनिष्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रिक शक्ति त्यतिबेला विभाजित थियो ।
यो पटकको एकता नितान्त फरक छ । आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर जनताको आकांक्षाको निष्ठालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गयौँ भने यो तागतले जनतालाई चाहिएको समृद्धि, सुशासन र विकास दिनेछ । राष्ट्रको एकता र आत्मसम्मान दिनेछ ।
अन्तत: विस्तारै निरंकुश तानाशाहको विरुद्ध आम जनताले राखेको चाहना राजनीतिक नेतृत्वको दिमागमा घुस्यो र ठूलो जनआन्दोलन भयो, र निरंशकुतन्त्रको अन्त्य भयो । त्यो आन्दोलन जनभावनाअनुसार भएको थियो । त्यसले कम्युनिष्टहरुलाई पनि अब विभाजनको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने नयाँ चेतनातिर अग्रसर गरायो । त्यही सन्दर्भमा तत्कालीन नेकपा एमालेको निर्माण भयो । माले र माक्र्सवादी मिलेर एमाले बन्ने प्रक्रिया त्यतिबेलै सुरु भयो । त्यस्तै गरी विभिन्न समुहमा विभाजित माओवादीहरुबीचको एकता पनि त्यतिबेला नै भयो । त्यो नेपाली जनता र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार नै निर्देशित थियो ।
याे पनि पढ्नुस प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि पार्टी एकता हुँदैन : जनार्दन शर्मा
त्यतिबेलै पनि माओवादी र एमालेबीच एकता सम्भव छ र हामीले प्रयास गर्नुपर्छ भनेर कमरेड मदन भण्डारी र मैले पहल थालेको थिए । तर दुर्भाग्यवश मदन भण्डारीको त्यो सपना पूरा भएन । हामीले निरन्तर एकताको पहल गर्यो । सहकार्य र वैचारिक संघर्षको उत्तरचढावहरु पार गर्दै आयौँ । यो विन्दुमा आइपुग्दा हामीले के महसुस ग¥यौँ भने यो देशले यो भन्दा बढी राजनीतिक अराजकता र अस्थिरता सहन सक्दैन । यो भन्दा बढी अस्थिरता र अराजकता तिर जाने छुट दियो भने राजनीतिक नेता र कम्युनिष्ट हुने छुट समाप्त हुन्छ भनेर नै हामीले एकताको सुरुवात गरेका थियौँ ।
पार्टी र जनताले मलाई नेताको ठाउँमा लगेर राखिएको छ । आज मलाई फेरि एकीकृत पार्टीको अध्यक्षको रुपमा काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । र यो अवसरको सही सदुपयोग गर्नेछु ।
यो नेपाली जनता र राष्ट्रको आवश्यकता र चाहना सम्बोधन गर्ने एउटा ऐतिहासिक अभियान हो । एकतो प्रक्रिया अघि बढेपछि मैले एकताका निम्ति पछाडि फर्किने पुल भत्काएका छौँ भनेर बारम्बार भनेको थिए । ओलीजीले यही मञ्चबाट खुट्टा तासेर भए पनि जुता मिलाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो । आज म गर्वका साथ भन्न सक्छु, हामीले जनताको अगाडि जे प्रतिबद्धता र संकल्प गरेका थियौँ, हामीले त्यसलाई पूरा गरेका छौँ । म आम कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरुलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु । हामीले गरेको पहिलो चरणको संकल्प पूरा भएको छ ।
अबको हाम्रो मुख्य चाहना जनतालाई सुखी बनाउनु र हाम्रो स्वाधीनतालाई रक्षा गर्नु हो । अन्तिम लक्ष्य भनेको देशलाई समाजवादतिर लिएर जानु हो । आज म आम जनता र समर्थक शुभचिन्तकलाई भन्न चाहन्छु, हामीले जनताको अगाडि गरको प्रतिबद्धताबाट पछाडि फर्कने छैनौँ । अब नयाँ युगको सुरुवात भयो । सुशासन र जनताको सुखको दिनको प्रारम्भ भयो । कम्युनिष्टहरुमा विचार, आदर्शमा कही न कही स्खलन भइरहेको दुखद अवस्थाको सामना हामीले पछिल्लो समय गर्दै आएका छौँ । इतिहासमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुले ठूलाठूला त्याग र बलिदान गरे । तर सत्तामा पुगिसकेपछि भ्रष्ट, स्खलित, आदर्शहिन र जनताले समातेर पिटिपिटि मार्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । अब यस्तो अवस्थाको के हामी अन्त्य गर्न सक्छौँ ? के साँच्चै हामीले आज जनताको पक्षमा काम गर्ने संकल्प गर्न सक्छौँ ? हामीले संकल्प गर्नैपर्छ, हामीले देशको निम्ति समर्पित हुने नयाँ ढंगको कम्युष्निट पार्टी, जनतासँग भिजेको नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध भएको कम्युनिष्ट पार्टी, विश्व, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिलाई ुबझ्न सक्ने कम्युनिष्ट पार्टी, निरन्तर जनतासँग र जनताका निम्ति समर्पित हुने कुराको सुरुवात गर्नुपर्छ ।
तर, कताकता सत्तामा पुगिसकेपछि विस्तारै स्खलित हुने जुन संकेत देखिएको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नका निम्ति यो पार्टी एकता सफल हुनैपर्दछ । हामी जनताको मुक्तिका लागि कतिऔँ दिन अनिदो, भोकभोकै खट्यौँ । आफ्नो लागि के भन्ने हामीले कति पनि चाहना राखेनौँ । तर अहिले म सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनैपर्यो भन्नेमा प्रतिष्पर्धा देखियो । यो बिउ हुर्किसकेको छैन । तर यसलाई हुर्किन नपाउँदै बिउमा नै निमिट्यान्न पारेर अब कम्युनिष्ट विचारधारामा सबैलाई केन्द्रित गर्नेतिर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।
यो विन्दुमा आइपुग्दा हामीले के महसुस ग¥यौँ भने यो देशले यो भन्दा बढी राजनीतिक अराजकता र अस्थिरता सहन सक्दैन । यो भन्दा बढी अस्थिरता र अराजकता तिर जाने छुट दियो भने राजनीतिक नेता र कम्युनिष्ट हुने छुट समाप्त हुन्छ भनेर नै हामीले एकताको सुरुवात गरेका थियौँ ।
सुशासन, न्याय र समृद्धि र जनताको निम्ति खुसी दिनका लागि आजको यो एकता हो । मैले बाँकी जीवन सामाजिक न्याय, विकास समृद्धि र समाजवादको आधार तयार पार्नका निम्ति समर्पित गर्ने घोषण गरेको छु । पार्टी र जनताले मलाई नेताको ठाउँमा लगेर राखिएको छ । आज मलाई फेरि एकीकृत पार्टीको अध्यक्षको रुपमा काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । र यो अवसरको सही सदुपयोग गर्नेछु ।
याे पनि पढ्नुस केपी अाेली जनयुद्ध दिवस मनाउन पेरिसडाँडामा नजाने
०१९ सालाट विभाजनको पीडा भोगेको कम्युनिष्ट आन्दोलन आजबाट ऐतिहासिक क्षणमा प्रवेश गरेको छ । आउने दिनहरुमा हामीले मिहिनेत गरेनौँ भने चुनौतीहर छन् । हामीले जसरी जनतालाइ विश्वास गरेर अगाडि बढेका छौँ । मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ, मेरो आफ्नै कुरा गर्दा पनि मेरो जीवनमा निरन्तरतामा क्रमभंग गर्दै आएको छु । मैले कमजोरी गरेको बेला जनता र राष्ट्रले दुख पाएको देख्छु, राम्रो गरेको बेला देश र जनताले सुख र गति पाएको देख्छु । यो एकताले देश र जनताले गति पाउनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
यो पटकको एकता नितान्त फरक छ । आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर जनताको आकांक्षाको निष्ठालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गयौँ भने यो तागतले जनतालाई चाहिएको समृद्धि, सुशासन र विकास दिनेछ । राष्ट्रको एकता र आत्मसम्मान दिनेछ । नेपाली भएर बाँच्नु र काम गर्नुको गौरव यसले प्रदान गर्नेछ । त्यसकारण यो बहुआयमिक छ, यसको मूल्यांकन इतिहासमा हुने नै छ । युवाहरुको निम्ति आजको दिन सयौँ वर्ष नबिर्सिने दिन भएको छ । सबैलाई शुभकामना, धन्यवाद र बधाई ।
ट्याग्स: cmparachanda, Left Unity